सोमवार, अक्टोबर 21, 2019
अक्टोबर 23, 2016 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आवसगृह, रङ्क, वास्तुशास्त्र
वास्तुशास्त्र अनुसार आवसगृहको रङ्क कस्तो उपयुक्त होला ? एक पटक सोचौ र विचार गरौ । वास्तुशास्त्र प्राचीन विज्ञान हो। यजुर्वेदको स्थापत्य अध्यायमा वास्तु शिल्पशास्त्रको वयान छ। वास्तुशास्त्रको पालन गरी बनाइएको घरमा बस्दा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यस्तो घरमा बस्दा उत्साह, उमङ र उल्लासको अनुभूति हुन्छ। वास्तुशास्त्रमा घरको कुन भाग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जानकारी दिइन्छ।
स्नान गृह (Bathroom) का लागि सेतो, गुलावी या कालो मिश्रण रङ्ग वेस हुन्छ । पूजा, ध्यान, प्रार्थना गर्ने पूजाकोठाका लागि हरियो, रातो, गुलावी या कालो मिश्रित रङ्क उपयुक्त हुन्छ । भान्छा कोठा (Kitchen) को लागि सेतो रङ्क राम्रो हुन्छ । केटाकेटीहरू सुत्ने कोठा (Children Sleeping Room) मा हरियो, नीलो या कालोरङ्क मिश्रण वेस हुन्छ । घरमूलीको शयन कक्ष (Guardian Sleeping Room) हरियो, नीलो वा गुलावी रङ्क मिश्रित हुनु राम्रो मानिन्छ । अध्ययन कक्ष (Study Room) मा नीलो, हरियो, रातो या गुलावी रङ्क राम्रो हुन्छ । वैठक कोठा (Guest Room) मा भने हरियो, पहेंलो या कालो रङ्क मिश्रित हुनु वेस हुन्छ ।
← वास्तुशास्त्र अनुसार कार्यालयहरूका लागि कस्तो रङ्क उपयुक्त होला ?
वास्तुशास्त्रमा रङ्कको सम्बन्ध →
मे 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0